اموزش یک | Ihe kpatara iro ụra – Mara ihe kpatara ya ma gwọọ ya
Ihe kpatara iro ụra – Mara ihe kpatara ya ma gwọọ ya
Kedu ihe na-akpata iro ụra? May nwere ike nwee ọtụtụ ihe na – akpata ya: ụgbọ elu oge dị ogologo, ihe aga-emebi ọgba aghara nkịtị nke ụra, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dịka ịnya ụgbọ ala. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime anyị na-eleghara ụra zuru oke, enwere ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ maka ụra. Ihe ndị a gụnyere nsogbu nke ihi ụra, ọrịa na-egbu mgbu n’ụkwụ, na ọgụ ihi ụra. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ n’ebe a na-eli ozu ma ọ bụ ndị ọrụ ha chọrọ ka ihe na-eme ha ghara ịna-ehi ụra. Nke a bụ n’ihi ụra ụra nke ukwuu n’abalị na enweghị ike ịnweta ụra zuru oke n’ehihie.
Ihe na-akpata iro ụra
Ọtụtụ ndị okenye chọrọ awa 2 ruo 4 na-ehi ụra n’abalị n’ihi ụra. Ọ bụ ezie na ụfọdụ chọrọ karịa ma ọ bụ obere ego a ka ahụ ha zuru ike nke ọma. Schweiz kwuru, “Nsogbu ihi ụra, enweghị ụra na ụra na-adịghị mma nwere ike inwe nsonaazụ ọjọọ.” Enweghị ezigbo ụra nwere njikọ chiri anya na isi nsogbu ahụike nke oge anyị. Nsogbu ndị dị ka ọbara mgbali elu, ọrịa obi, ọrịa strok, ọrịa shuga, oke ibu na ara
Ihe na-akpata ihi ụra Ọ bụrụ n ’anya gị mechiri emechi ma ọ dị gị ka ị na-ero ụra, ịnwere ike inwe nsogbu ụra. Nsogbu ihi ụra na-agụnye ike mmadụ ịrahụ ụra ma ọ bụ ịnọgide na-ehi ụra ma ọ bụ akparama agwa ihi ụra, dị ka ihi ụra. Disordersfọdụ nsogbu ụra ndị ọzọ bụ obere oge, dịka ọgụ ụra. N’oge ọgụ ụra, mmadụ na-ehi ụra n’ehihie niile. Mgbe ndị ọrịa gara n’ụlọ ọgwụ ihi ụra Davila, ọ na-ebu ụzọ achọ ịma ma nsogbu ahụ ọ̀ ga-aba ma ọ bụ uru ụra ya buru. Ọ sịrị: “Ajụjụ mbụ ndị dọkịta jụrụ gbasara ụra ha bụ ma ha nwere ụra zuru oke.” Hà na-ehi ụra kpamkpam? Nke a bụ ajụjụ dị mkpa. Maka na anyi kwenyere na otutu mmadu nwere nsogbu a. Ha na-ezughị ezu ma ọ bụ na-enweghị oge, mgbe ụfọdụ ụra na-ekweghị ala ala. ” Davila na-achọ mma ma ọ bụrụ na o ji n’aka na ndị ahịa ya anaghị enwe nsogbu ihi ụra iji hụ ma ọ nwere nsogbu ihi ụra.
Ihe Na-akpata Ihi Ura Dabere na Journal of the Club ‘Club Clinic; Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ike gwụ gị oge niile.
Nnyocha e mere na-egosi na ndị na-ehi ụra karịa awa 9 n’abalị na-anọ n’ihe ize ndụ maka ọrịa ndị dị ka ọrịa shuga na oke ibu karịa ndị ọzọ.
Ihe kpatara ura riri ura bu ihe mmadu bu n’obi, onye obula n’acho kwa ura nke awa isii nke oma kwa ubochi .. Mgbe ubara a buru ura, onye ahu na enwe nsogbu. Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-egosi na 1.6% nke ndị ụwa na-arịa ọrịa ihi ụra na nke a na-abawanye.
Ihe 4 maka ike ọgwụgwụ na ụra efu:
Ihe Na – akpata Ahụhụ Ihi ụra: Ọ bụ ezie na ọrịa nwere ọtụtụ mgbaàmà doro anya, ha nwere ike gbasaa n’ahụ gị mgbe ụfọdụ na-enweghị ịchọpụta ma ọ bụ dọkịta achọpụta ya. Dịka ọmụmaatụ, na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ọrịa ahụ nwere ike ibute oke ike ọgwụgwụ.
Ihe Na – akpata Ajọ Ahụhụ: Ọ bụ ihe ịmara na histamine na kemịkal ndị ọzọ anụ ahụ na – alụ ọgụ maka ịlụ ọgụ allergies bụ hypnotic. Insom na-akpata ehighị ụra.
Ihe na-akpata oke ụra bụ ọbara ana – akpo sel sel ọbara na-arụ ọrụ ịnapụta oxygen site na ngụgụ gaa na akụkụ ahụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ụkọ ọbara ọbara ma ọ bụ nwee nsị nke sel ọbara, onye ahụ ga-arịa ọrịa oge ọ bụla ike gwụrụ ya nke na ọ gaghị enwe ike ime ihe ha na-eme kwa ụbọchị.
Ọgba ọchị: N’ebe ụmụ nwanyị nọ, mbelata nke estrogen n’ihe ka ukwuu nwere ike ibute oke ibu na ike ọgwụgwụ.
Lee vidio a maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe na-akpata ụra ụra.
Previous Previous post: Orsakir syfju – Þekkið orsökina og meðhöndlið hana
Next Next post: Tristura kausak – Ezagut itzazu arrazoia eta tratatu